ओमकार टाइम्स राती सुत्दा कतै तपाईले यस्ता कार्य त गर्नुभएको छैन? होस पुर्याउनुहोस है, पछि पछुताउनु पर्ला – OMKARTIMES
राती सुत्दा कतै तपाईले यस्ता कार्य त गर्नुभएको छैन? होस पुर्याउनुहोस है, पछि पछुताउनु पर्ला
मान्छेलाई निन्द्रा नभई नहुने हो । त्यसैले भन्ने पनि गरेका छन्, मान्छेले आधा जीवन त सुतेरै बिताउँछ ।
तर निन्द्रा गहिरो र आरामदायी भने हुनुपर्छ । नत्र स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भने हाम्रो दैनिकीमा समेत खटपट हुन्छ ।
एक अध्ययन अनुसार विश्वमा ३९ प्रतिशत मानिस मात्रै आरामसँग सुत्ने गरेका छन् । २२ प्रतिशत मानिस रातको समयमा राम्रोसँग सुत्न सक्दैनन् भने ४७ प्रतिशत मानिस तनावकै कारण सुत्न सक्दैनन् । तर धेरैजसो आफ्नै गल्तीका कारण मानिसहरु आफ्नो निन्द्रा सुरक्षित बनाउन सक्दैनन् । तल हामीले त्यस्ता केही कारणहरु उल्लेख गरेका छौँ । ती बानी तपाईँमा छन् भने तुरुन्त हटाउनु होला ।
एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार पाल्तु जनावरलाई सँगै राखेर सुत्ने मानिसहरुमध्ये ६३ प्रतिशत मस्तसँग सुत्न सक्दैनन् । त्यसैले सुत्दा जहिले पनि पाल्तु जनावरलाई सँगै राखेर नसुत्नुहोला ।
ती जनावरको ¥याल र अन्य रोग मानिसमा सर्ने भएकोले पनि सँगै सुत्नु निन्द्रा मात्रा नभई स्वास्थ्यको हिसाबले पनि उचित नहुने स्वास्थ्र्कीहरु बताउँछन् ।
कोहीले अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने सुत्ने गर्छन् । मदिरा सेवन गरेर सुत्दा निन्द्रा नलाग्ने होइन । तर, यसरी सुतेमा बेहोसमा ढले जस्तो हुन्छ र भोलिपल्ट टाउको गह्रोङ्गो हुन्छ । मदिरा सेवन गरेर सुत्दा प्राय मानिसले सपना देखिदैन् भन्छन् । यही कारणले नदेख्ने बताइन्छ ।
एक युनिट मदिरा प्रोसिस गर्न शरिरलाई सामान्यतया १ घन्टा लाग्ने गर्दछ । सुत्ने बेलामा बरु मदिराको सट्टा हर्बल टी सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
कहिलेकाही टिभी हेर्दाहेर्दै बत्ति गएमा तपाईले बिर्सेर बत्तिको स्विच बन्द गर्न बिर्सनु भयो भने मध्यरातमा बत्ती आउँदा निन्द्रा झनै झस्किन सक्छ ।